China kwakakurudzira Sheets Kugadzira uye Fekitori | Derunying
Kushanda: Inoshandiswa isiri-yakamanikidzwa midziyo uye matangi ekuchengetedza.
Iri rakavhurika tambo yesimbi ine ukobvu hwakati painobuda mufekitori, uye ndiro yesimbi ine hukobvu nehupamhi hwakakungurutswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Hwendefa repakutanga rakakungurutswa kusvika pahukuru hunodiwa neyakajairwa nyika painobuda mufekitori. Kazhinji, ndiro yepakutanga ine zviyero zvakaomarara, mashandiro akanaka uye mutengo wakakwira. Kuvhura piritsi kwakachipa.
Ukobvu hwenzvimbo yakatetepa iri 1.5-20mm, uye izvo zvinhu ndeye Q235 uye Q345. Mushure mekuburitsa, kuenzanisa, kuseta, uye kuveura, inova ndiro yakapfava nehurefu uye hupamhi hunodiwa Iyo inokodzera kugadzirisa mahwendefa anotonhorera anotonhora, kwakakurudzira mahwendefa, mahwendefa ane ruvara, uye mahwendefa esimbi isina chinhu.
1. Mutengo wakachipa uye kureba kunogona kusununguka kusarudzwa;
2.Zvakanakira kutakura, zvisinei nehukuru hwesimbi ndiro; Izvo zvakare zviri nyore kwazvo kurodha uye kuburitsa midziyo, uye zvakare yakachengeteka kwazvo panguva yekufambisa. Inofananidzwa nemakungwa akakomberedzwa, ine mukana wakanaka uye chengetedzo panguva yekufambisa
3. Kucheka kuri nyore, uye izvo zvinhu zvinogona kutemwa maererano nezvinodiwa chaizvo nesimbi yeplate saizi;
4. Zvinobudirira chengetedza zvinhu. Semuenzaniso, tangi rekuchengetedza rinoda makumi maviri esimbi mahwendefa e6800 × 1500 × 6. Iwo musika mahwendefa esimbi anowanzo kuve 6000, 8000, uye 9000 hurefu. Kana marata esimbi mahwendefa akashandiswa, pachave nemadiki mashoma. Nayo yakavhurika ndiro, 6900 ndiro yesimbi inogona kushandiswa zvakananga, iyo inoponesa zvinhu, inova zvakare mukana mukuru. Kunyanya yezvinhu zvisina simbi zvinhu, mhedzisiro yekuchengetedza zvinhu uye kudzikisa mutengo zviri pachena kwazvo.
Chinyorwa: SGCC, S350GD + Z, S550GD + Z, DX51D, DX52D, DX53D
Zingi kupfeka: 40-275G / M2
Spangles: Hapana Spangle / Spangles
Technique: Hot akakungurusa / Cold akakungurutswa
Kavha: Export kurongedza mureza
Surface kurapwa: mafuta, passivity kana chromium-isina passivation, passivation + yakazorwa mafuta, chromium-isina passivation + yakazorwa mafuta, inopokana nezvigunwe kana chromium-isina nemishonga yezvigunwe.
Pashure: Straight welded mutopota
Zvadaro: Hot yakapetwa coils esimbi